Mount Tatras: astaamaha, muuqaalka iyo waxqabadyada | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 29/09/2021 15:21 | Geology
Laga soo bilaabo mid ka mid ah meelaha dalxiiska ugu caansan Slovakia waa Buuraha Tatras. Buuro kaliya ayaa loo malaynayaa in laga helo Poland, eber inta badan aagga beerta dabiiciga ah waxay ku taal dhulka Slovak. Maskaxda ku hay in aan lagu khaldin Nízke Tatry, Low Tatras, oo koonfur ka xigta Highlands. Buurahani waxay leeyihiin astaamo u gaar ah sidaa darteed aad bay u soo jiidasho badan yihiin booqashada.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa dhammaan astaamaha, dadka iyo waxqabadyada ka dhaca Buurta Tatras.
2 Dadweynaha Mount Tatras
3 Hawlaha Mount Tratas
3.1 Isboortiga barafka iyo jiilaalka
3.2 Socodka buurta Tatras
Vysoke Tatry waa magaca Slovakia ee Buuraha Tatras Sare, oo qayb ka ah Buuraha Carpathian, kan ugu sarreeya xagga bariga Romania. In ka badan 25 meelaha ugu sarreeya ayaa ka sarreeya 2.500 mitir. Dhulka oo kaliya 25 kiiloomitir ballackiisuna yahay 78 kiiloomitir, muuqaalka harooyinka buuraha, biyo -dhaca iyo canyons -ka waa la isku koobay.
Buuraha Tatras ayaa markii ugu horreysay la xusay sanadkii 999, markii Boleslaus II ee sharafta lahaa uu buuraha u adeegsaday soohdintii Bohemia. Beerta Qaranka ee Buuraha Tatra (TANAP) waa beerta ugu da'da weyn qaranka ee Slovakia, waxaa la aasaasay 1949 waxayna leedahay wuxuu ahaa UNESCO Reserve Biosphere tan iyo 1993, kaas oo damaanad qaadaya kala duwanaanta flora iyo fauna. Kaydku wuxuu gabbaad u yahay qaar ka mid ah noocyada halista ku jira, sida bahalka buniga ah ee yurub “King of the Tatra Mountains”, kaas oo culeyskiisu yahay ilaa 350 kiilogaraam oo dhererkiisu gaadho ilaa 2 mitir. Wax khatar ah ma keenaan sababtoo ah waxay ka carari doonaan bini -aadamka waxaana mararka qaarkood la arki karaa iyagoo waddada ka gudbaya. Waxa kale oo caadi ah in la arko gambaleelka, qamriga iyo marmotada.
Tatras -ka Sare waxaa loo qaybiyaa Tatras -ka Galbeedka, (dhexe) Tatras, iyo Belensk Tatras, kuwaas oo lagu kala sooco sida ay u kala kooban yihiin iyo juquraafi ahaan. Dadku waxay ku yaalliin waxa loogu yeero Wadada Xorriyadda, oo isku xirta saddexdaas qaybood ee Tatras-ka Sare.
Dadweynaha Mount Tatras
Saldhigga ugu habboon ee wax looga barto Buuraha Tatra waa Vysoké Tatry, oo ka kooban saddex magaalo: Štrbské Pleso, Starý Smokovec iyo Tatranská Lomnica.
Xarunta maamulka ee Tatras Sare, Tatranska Lomnica, oo ka mid ah degsiimooyinka ugu waaweyn uguna quruxda badan, waxay ku taallaa Waddada Xorriyadda, dhinaca Lomnicky Peak. Waa mid ka mid ah meelaha barafka lagu tago ee ugu caansan Slovakia. Waxaa kaloo jira Matxafka TANAP, oo aad wax badan ka baran karto kaydka noolaha.
Gudaha Tatranska Lomnica, waxaan ka heli karnaa goobo lagu ciyaaro barafka iyo hoy, oo ay ku jiraan Hotel Lomnica, oo la dhisay 1893, ka dib tobanaan sano oo dayacaad ah, oo dib loogu soo celiyay muuqaalkiisii ​​hore ee haybada badnaa. Buuraha Tatra waxaa jira waddooyin badan oo socod iyo fuulid, haddii aad danaynayso, waad noo soo qori kartaa si aannu kuu tusno jidka.
Strbske Pleso waa dalxiis baraf, dalxiis iyo dalxiis xeebeed. Waxay ku taal meel u dhow harada alpine ee barafka Strbske waana ikhtiyaar wanaagsan oo loogu lugayn karo Krivan iyo Rysy. 16 kiiloomitir ee dariiqyada barafka xorta ah ee dal-gudubka iyo dalcadaha dhaadheer ayaa ah sababaha wanaagsan ee imaan kara.
Stary Smokovec wuxuu leeyahay rafcaanka baabuurka fiilada ee Hrebienok iyo waa bar bilow u ah waddooyinka buuraha xagaaga. Kaliya 30 daqiiqo baabuurka fiilada, waxaad ka heli doontaa biyo -mareenka Studeny potok.
Hawlaha Mount Tratas
Shaki kuma jiro in Tatrasku dhiirri-geliyo waxqabadyada sida barafka, dhaadhaca ama barafka-barafka ama barafka, laakiin sidoo kale waa ikhtiyaarro wanaagsan oo loogu talagalay socodka iyo la-xiriirka dabeecadda xagaaga.
Goobaha barafka qaarkood waxay leeyihiin barkado iyo barkado kuleyl leh, sida AquaCity Poprad, Aquapark Tatralandia ama Besenova. Hoyga Chata pod Rysmi ee hoos yimaada Rysy peak waa kan ugu sarreeya Buurta Tatras, 2250 mitir oo ka sarraysa heerka badda
Waddada Tatranska Magistrala waa waddada ugu dheer Tatras -ka Sare, oo leh in ka badan 70 kiiloomitir oo isku xirta qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan uguna caansan beerta dabiiciga ah, sida Podbanské, Štrbské pleso (Lake Strbsk), Popradské pleso (Lake Poprad), Hrebienok, Skalnaté pleso (Skalnate Lake) ama Zelené pleso (Green Lake). Waxay caadi ahaan qaadataa inta u dhaxaysa saddex ilaa shan maalmood in la dhammaystiro, lagu seexdo hoy.
Isboortiga barafka iyo jiilaalka
Goobta barafka ugu dheer ee Buuraha Tatra waxay ku taallaa Xarunta Barafka ee Tatranska Lomnica. Waxay ka baxdaa Lomnicke sedlo ka dibna waxay aadeysaa tuulada Tatranska Lomnica. Dhererka guud waa qiyaastii 6 kiiloomitir, jiirada ayaa ah 1300 mitir halka laga bilaabayo soo degistu waxay ku habboon tahay oo kaliya barafleyda horumarsan.
Mid ka mid ah astaamaha aan ka heli karno Tatras waa beerta botanical ee ugu sarreysa Slovakia oo ku taal Lomnicky peak, oo dhererkeedu yahay 2634 mitir. In kasta oo uusan weyneyn, waxaa jira 22 nooc oo ubax ah beerta botanical -ka. Dusha sare ee Lomnicky Peak waxaa ku yaal goobjooge oo labanlaab u ah hoy.
Waxaa jira in ka badan boqol haro oo ku yaal beerta qaranka. Harada ugu weyn uguna qoto dheer waa Veľké Hincovo pleso, Modré pleso ugu sarreysa waa 2.192 mitir kuwa ugu caansanna waa Štrbské pleso iyo Popradské pleso. Inkastoo ay jiraan godad badan, kaliya Belianska jaskyňa ayaa qalabaysan oo u furan dadweynaha.
Soo jiidashada kale ee jiilaalka waa Hrebienok Ice Dome, oo ah farshaxanka barafka oo doorta mawduuc sannad walba (sida Sagrada Familia ee Barcelona). Tani waa hawl bilaash ah oo madadaalo u ah carruurta.
Socodka buurta Tatras
Qaar ka mid ah meelaha ugu sarreeya iyo bartilmaameedyada raad -raaca ayaa ah Gerlachovsky Stit (meesha ugu sarraysa, 2655 m oo ka sarraysa heerka badda), Lomnicky Stit oo ugu booqashada badan sababtuna tahay baabuurka fiilada, ama Krivan oo ku yaal Bariga Tatras, oo ah mid ka mid ah meelaha ugu caansan. Slovak -gu sidoo kale waa astaanta dalka.
Qeybta Slovakia ee Tatras -ka Bari, 7 dusheeda oo kaliya ayaa lagu gaari karaa waddooyinka. Laba ka mid ah waxay ku sugan yihiin xadka Poland sidoo kale waxaa laga heli karaa dhinaca Polish. Meelaha ugu sarreeya ee dhinaca Slovakia waxaa lagu heli karaa oo keliya hagaha buurta la xaqiijiyay.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan Buurta K gadaasheeda iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Buurta tatras